बल प्रयोग गरेर केसीलाई काठमाडौँ लगियो
जुम्ला ः अनशनको २० औँ दिन डाक्टर गोविन्द केसीलाई सरकारले जुम्लाबाट बल प्रयोग गरेरै काठमाडौँ लिएको छ । आफ्ना माग पुरा नभएसम्म, काठमाडौँ नफर्किने अडान गरेका डा. केसीलाई बल प्रयोग गरेरै नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ लगिएको हो । डा. केसीलाई काठमाडौँ पठाउन जुम्ला बासी, विद्यार्थी लगायत उनका समर्थक तथा शुभचिन्तकले मानेका थिएनन् । तर, प्रहरी प्रशासनले सरकारको आदेश पालाना गरेर बल प्रयोग गरी प्रतिष्ठानको नयाँ भवन तोडफोड गर्दै, विद्यार्थी स्वास्थ्यकर्मीलाई तितरवितर पार्दै, केसीलाई अनशन स्लथबाट नेपाली सेनाको भगवती दल गणमा पुराएर केसीलाई लगिएको हो ।
काठमाडाँैमा पनि अनशन बस्छु
२० दिन जुम्लामा अनशन बसेका डाक्टर केसीले विहिबार काठमाडौँ जानु भन्दा पहिले पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै, माग पुरा नहुन्जेल काठमाडौँ गएर पनि अनशन जारी राख्ने बताए । प्रहरी प्रशासन दमनले यहाँका विद्यार्थी तथा भौतिक संरचनामा क्षेति हुने अबस्था देखे, ठुलो रक्तपात हुने सम्भावना देखे, उनले भने, नचाहदै पनि मेरो अडान तोडेर काठमाडौँ जान लागेको उल्लेख गरे । उनले, आफुलाई बल प्रयोग गरेर सरकार लिएको आरोप समेत लगाए । सरकारले मेरा माग पुरा गरेको भए, जसरी आएको थिए, त्यसरीनै जान्थे, तर दमनकारी स्वाभावमा बल प्रयोग गरेर लिन खोज्दा भएको क्षेति तथा तनाव पुर्ण अबस्थालाई मध्यनजर गरेर काठमाडौँ जाने निधो गरेको स्पष्ट पारे । विद्यार्थीलाई मार्नकै लागि प्रहरीले गोली चलाएको हो । उनले भने, कारण बस, प्रहरीकै गोली प्रहरी माथि लाग्न गयो । आफुलाई बल प्रयोग गरेर काठमाडौँ लिन खोज्दैमा देश र नेपाली जनताले मुक्ति पाउदैनन् । यथासक्य माग पुरा नभएसम्म काठमाडौँ अनशन जारी राख्ने बताए । गुण्डागर्दी मच्चाउनु भन्दा आफैले काठमाडौँ जाने निष्कर्ष गरेको उल्लेख गरे । डा. केसीले रुदै भने, अस्पतालमा तोडफोड नगर, राज्यको दमनकारी शैलीबाट कर्णालीका जनतलाई धेरै दुखी बनाउन नचाहेको भन्र्दै जान तयार भएको बताए ।
झडपमा दुई दर्जन घाईते
अनशनरत डाक्टर केसीलाई सरकार पक्षले बल प्रयोग गरेर लिन खोज्दा जुम्लामा विद्यार्थी तथा प्रहरी बीच ढंगामुडा तथा प्रहरीले लाठी लार्ज गरेको छ । उक्त झडपमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा अध्यायरत दुई दर्जन बढि विद्यार्थी घाईते भएका छन् । भने, उनीहरुको प्रतिष्ठानमै उपचार भईरहेको डाक्टर पुजन रोकायाले बताए । उनले भने, विद्यार्थीको उपचार भईरहेको छ, घाईते हुनेमा बढि छात्राहरु परेका छन् । अधिंकाश विद्यार्थीको चोट तल्लो शरिर पछिको पिठ्युमा देखिएको डाक्टर रोकायाले उल्लेख गरे । प्रहरी प्रशासनले बल प्रयोग गरेरै, डा. केसीलाई लिन खोजेपछि विद्यार्थीले रोकेका थिए ।
घाईते रुपेश उपाध्यायले भने, डा. केसीले जान्न भनिरहँदा किन लिने, भन्दा भन्दै एक प्रहरीले सिधै लाठी हान्यो, त्यसपछि सबै विद्यार्थी तथा प्रहरी बीच हानाहान भएपछि आफु घाईते भएको उनको भनाई छ । सरकारले केसीलाई लिन पठाएको, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, महेन्द्र बहादुर शाही, कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी तथा वार्ता टोलीका संयोजक खगराज अधिकारी लगायत केसी पक्ष बीच वार्ता हुदै प्रहरीले बल प्रयोग गरेपनि नयाँ अस्पताल भित्रै झडप भएको हो ।
प्रहरी जवानको अबस्था खतरा
झडपमा गम्भीर घाईते प्रहरी जवान, कमल उपाध्यायको स्वास्थ्य अबस्था खतरायुक्त रहेको प्रतिष्ठान स्रोतले जनाएको छ । झडप हुँदा प्रहरीले नै विद्यार्थीलाई हान्न खोजेको गोली प्रहरी जवान कमल उपाध्यायलाई लाग्दा गम्भीर घाईते भएको प्रहरी प्रमुख डाक्टर तपन कुमार दाहालले बताए । उनले भने, घाईते उपाध्यायको छातीमा गोली लागेको छ । उनलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानमा १५ लाख बढिको क्षेति
प्रहरी प्रशसानले बल प्रयोग गरेर डाक्टर केसीलाई लिन खोजेपछि भएको झडपका कारण कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नवनिर्मित अस्पतालको झण्डै १५ लाख भन्दा बढि क्षेति भएको प्रतिष्ठानका रजिष्टार विश्वराज काफ्लले बताए । उनले भने, अस्पताल संचालनमा आएको धेरै पनि भएको छैन्, नवनिर्मित अस्पतालमा विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप भएपछि झयाल ढोकाका सिसा सबै फुटेका छन् ।
भने, सयौँका हिसाबमा कुर्ची, टेबुलहरु पनि भाच्चिएका छन् । अस्पताल संचालनमा आएको ३÷४ महिना नवित्दै राज्य पक्षबाटै प्रतिष्ठानमा तोडफोड भएको प्रति प्रतिष्ठान परिवारले आपत्ति जनाएको छ । वार्ता हुदाँ हुदै पनि बल प्रयोग गरेर केसीलाई लिन खोजेपछि झडप शुरु भएको थियो । नयाँ अस्पतालको दोस्रो तलाको कुर्ची, टेबुल, र झ्याल ढोकाका सिसा केहि पनि बचेको छैन् । भने, प्रतिष्ठानको एम्बुलेन्स माथि पनि तोडफोड भएको छ । केसीका समर्थक विद्यार्थी तथा प्रहरीले अस्पताल भित्रै हानाहान गरेपछि प्रतिष्ठानले झण्डै १५ लाख बढिको नोक्सान व्यर्होनु परेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
केसीलाई जुम्लाबाट माला लगाएर विदाई
जुम्लावासीले अनशनरत डा. केसीलाई माला लगाएर विदाई गरेका छन् । अनशनको बिसौं दिन सरकारले जुम्लामा बल प्रयोग गरेर डा. केसीलाई उठाउन खोजेपछि प्रतिरोधका बाबजुद उनी काठमाडौँ आउन सहमत भएका थिए । जुम्लामा कर्फ्यु घोषणा गरेर सरकारले सर्वसाधारण र केसीका समर्थकहरुलाई निष्क्रिय पार्न खोजेपछि डा. केसीले गुन्डागर्दी गर्नुपर्दैन, अस्पताल तोडफोड पनि गर्नुपर्दैन बरु म काठमाडौ जान्छु भनेका थिए । त्यसपश्चात जुम्लाबासीले डा. केसीलाई माला लगाएर बिदाई गरेका थिए । डा. केसी अनशनमा बसेको ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप गरेपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वातावरण निकै तनावपूर्ण रहेको थियो । भने, विद्यार्थी डा. केसीको अनशन स्थललाई नियन्त्रण गर्नै गर्न दिएका थिएनन । डा. केसीलाई काठमाडौ नपठाउने भन्दै समर्थकले सुरक्षाकर्मीको प्रतिकार गरेका थिए । तर सुरक्षाकर्मीले लाठीचार्ज गरेर दुई दर्जन घाइते भएपछि जुम्लाको माहोल तनावपूर्ण भएको थियो ।
जुम्लामा विरोधका कार्यक्रम जारी
बल प्रयोग गरेर डाक्टर केसीलाई काठमाडौँ लगिएता पनि उनको समर्थकले जुम्लामा भने, विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु जारी राख्ने भएका छन् । बल प्रयोग गरेर केसीलाई लिन खोजेपछि भगवती दल गणसम्म नारा बाजी गर्दैै विरोध गरिरहेका जुम्लाबासीले डा. केसी काठमाडौँ गएपनि माग पुरा नहुन्जेल विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने, नागरिक समाजका संयोजक राजबहादुर महतले बताए । उनले भने, डा. केसीको माग पुर्तिका लागि हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रम जारिरहन्छ । सरकारले कर्णालीका जनता प्रति गरेको गैरन्यायीक हर्कतको मुल्य चुकाउनु पर्ने समेत चेतावनी दिए । पाँच दिन सम्म कभर्डहल तथा १४ दिन प्रतिष्ठानको सघन कक्षमा अनशन बसेका डा. केसीलाई बल प्रयोग गरेर, जुम्लामा बासीले पठाउन नमान्दा मान्दै पनि विहिबार काठमाडाँै लगियो ।
अस्पतालमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्नु निन्दनीय
जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउन अनशनस्थल पुगेका प्रहरी र डा. केसी समर्थक स्वास्थ्यकर्मी बीच भएको झडप प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ । विहिबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आयोगले झडपबाट तीन चिकित्सक, एक प्रहरी सहित केही विद्यार्थी र नर्सहरु घाइते भएको घटना प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । आयोगले उक्त घटनाको अनुगमन भइरहेको जनाएको छ । ‘अस्पताल भवन भित्रै प्रहरी प्रवेश गरी कुटपीट गर्नु, झडप भई अस्पताल भवन लगायत स्वास्थ्य उपकरणहरुमा क्षति पुग्नु निन्दनीय कार्य हो । झडपको क्रममा घाइते भएका चिकित्सक, विद्यार्थी एवं प्रहरीलाई निःशुल्क र प्रभावकारी स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दछ ।’ आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘हिंसा र अनुचित बल प्रयोगबाट मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने हुँदा सार्थक वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न आयोग सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’
त्यसैगरी नेपाली काँग्रेस जुम्लाले पनि डा केसी माथि भएको प्रहरी दमन प्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ । अस्पताल भित्र प्रहरी बल प्रयोग भएको यो घटना निन्दनिय हो विज्ञप्तीमा भनिएको छ । विद्यार्थी स्वास्थ्यकर्मी लगायत धनजनको धेरै क्षेति भएको छ यो घटना प्रति घोरभत्सना गरेको छ । नयाँ शक्ति पार्टी जुम्लाले पनि यस घटना प्रति घोर भत्सना गर्दै प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०७५, बिहीबार